Casharrada casharrada Android talaabo talaabo ah: uga faa'iideyso mobiladaada | Androidsis (Bogga 13)
Fiidiyowga salaanta kirismaska ​​ee bilaashka ah, ka dhig Santa Claus inuu u hambalyeeyo qofka aad rabto
Maanta waxaan kuu sharaxeynaa talaabo talaabo ah sida loo abuuro fiidiyowga salaanta kirismaska ​​ee Santa Claus gabi ahaanba bilaash.
Samsung ayaa xadidi doonta batteriga Galaxy Note 30 ilaa 7% Yurub
Laga bilaabo 15-ka, Samsung waxay soo bandhigi doontaa cusbooneysiin Yurub ah oo xaddidi doonta lacagta Galaxy Note 7 oo keliya boqolkiiba 30
Android Nougat wuxuu gaaraa 0,4% tirooyinka qaybinta Android
Bil kasta Google waxay daabacdaa tirooyinka cusub ee qaybinta Android ee xaqiijinaya koritaanka yar ee Nougat iyo imaatinka booska labaad ee 6.0.
Xiriirada Google ee aaminka ah waa barnaamij lagu ogaanayo haddii asxaabtaada ama qoyskaaga ay sifiican usocdaan marka la isticmaalayo juqraafi.
Surfy Browser, shabakad internet oo cusub oo ay tahay inaad ogaato
Baadhitaanka 'Surfy Browser' ayaa ah biraawsar deg deg ah oo cusub oo loogu talagay Android kaas oo keena astaamo qabow isla markaana bixiya khibrad websaydh wacan
Beta Apps waxay kuu fududeyneysaa inaad marin u hesho dhammaan barnaamijyada Google Play ee betas
Beta Apps waa barnaamij fudud oo ku siinaya inaad marin u hesho dhammaan betas-ka barnaamijyada ku jira Google Play Store xilligan.
Khubaradu waxay sheeganayaan in Galaxy Note 7 uu aad ugu dhuuban yahay baytariga
Shirkad nashqadeeyaha qalabka, ayaa sameysay aragti qarxeysa Note 7 si looga baxo in terminalku yahay mid aad u dhuuban, waxay si dhib yar ugu ogolaatay batariga inuu "neefsado"
Haddii aad rabto kumbuyuutar leh habeyn weyn, SwiftKey, adoo u rogaya dhammaan mawduucyada lacag bixinta bilaashka, ayaa ugu fiican arrintan.
Iibso tigidhkaaga Bakhtiyaa-nasiibka Kirismaska ​​ee leh 'TuLotero' oo si ammaan ah ugu ciyaar koox
Laga bilaabo taleefankaaga casriga ah waxaad ka iibsan kartaa tobnaad ee Bakhtiyaa-nasiibka Kirismaska ​​si aad ula wadaagto asxaabtaada ama qoyskaaga si fudud.
Mar dhow waxaa jiri doona batariyaal super ah oo ku soo shuban doona ilbiriqsiyo isla markaana socon doona 20 jeer ka dheer kuwa hada socda
Tikniyoolajiyad cusub oo batteriyaal ah ayaa soo ifbaxaysa oo ku shubaysa ilbiriqsiyo soconaya illaa 20 jeer ka badan iyada oo aan la nabaad-guurin ama qashin.
Codsiyada lagu barto sida loo ciyaaro gitaarka
Ma rabtaa inaad barato sida loo ciyaaro gitaarka? Ha moogaan barnaamijyada ugu fiican ee mobiladaada ama kaniiniga aad ku baran doonto ku ciyaarida qalabkan.
Galaxy S7 oo leh Android 7.0 Nougat wuxuu yeelan lahaa xallinta 1080p asal ahaan
In the Android 7.0 Nougat beta ee Galaxy S7, Samsung ayaa bedeshay xalka ugu dambeeyay ee Quad HD ilaa 1080p Full HD.
Ma rabtaa inaad miisaankaaga dhinto? Ku soo dejiso barnaamijyadan si aad u lumiso miisaanka jimicsiga ugu fiican iyo talooyinka aad ku waayi doonto kiiladaas dheeriga ah.
Noqo DJ dhab ah oo leh edjing PRO, abka ugufiican ee iskuxirka muusikada elektarooniga ah
Haddii aad raadineyso barnaamij aad ku bilaabi karto adduunka isku dhafka iyo DJing, edjing PRO waa mid ka mid ah hababka ugu wanaagsan ee sidaas lagu sameeyo. Hadda waxaa lagu iibinayaa € 0,10
Jaangooyaha Volume wuxuu dejiyaa jadwalka waqtiga ee heerarka mugga ee mobilkaaga
Jaangooyaha Volume waa barnaamij cusub oo kuu oggolaanaya inaad barnaamij ka dhigto heerarka mugga saacad kasta si aad si toos ah ula qabsato
Waqtiga Buddy ayaa mas'uul ka ah inuu ku tuso kaalandarkaaga oo leh aagag waqti kala duwan leh
Haddii aad rabto inaad xakameyso saacadaha waa dhacdooyinka ay tahay inaad ka soo qayb gasho adduunka oo dhan, Time Buddy ayaa adiga loogu talagalay.
Adeegyada Google Play ayaa joojin doona taageerida Android Gingerbread iyo Honeycomb sanadka 2017
Gingerbread iyo Honeycomb ayaa noqon doona labada nooc ee Android ee aan dib dambe u taageeri doonin Adeegyada Google Play horaanta 2017.
Facebook wuxuu qaataa 20% batterigaaga terminal maalintii
Kaliya maahan inay maamusho isticmaalka batari aad u tiro badan, illaa 20% maalintii, laakiin sidoo kale waxay hoos u dhigeysaa boosteejada iyadoo adeegsaneysa ilo aad u tiro badan.
Signal hadda wuxuu fududeynayaa xaqiijinta asturnaanta sheekaysigaaga
Signal waa barnaamij diiradda saaraya asturnaanta farriimaha waana hadda markay hirgelinayso xitaa tallaabooyin dheeri ah howlgalkaas
Hada soo dejiso nooca cusub ee Play Store oo leh muuqaal gebi ahaanba la cusbooneysiiyay
Maanta waxaan ku baraynaa sida loo soo dejiyo nooca cusub Google Play Store si aad ugu raaxeysato muddo dheer ka hor inta Google aysan cusbooneysiin.
Beta-kii labaad ee Android Nougat ee Galaxy S7 iyo S7 Edge hadda waa la heli karaa
Nooca labaad ee beta ee Android 7.0 Nougat ee Samsung Galaxy S7 iyo S7 Edge ayaa durba bilaabay in lagu qaybiyo suuqa Yurub.
Soo gal xujooyinka ereyga ee New York Times hadda ka soo qaad abtigeeda rasmiga ah
Barnaamijka qoraalka ee New York Times ayaa laga heli karaa macruufka iyo Windows Phone in muddo ah hadda, hadda waa waqtigii loogu talagalay Android.
Barnaamijyadan 4-ka ah ee Google waxay keliya ka siman yihiin inay soo saareen G weyn oo ay tayo wanaagsan ku leeyihiin heerar kasta.
Xawaaraha Degdega ah ee 4.0 waa mid rasmi ah: in badan oo batteriga ah ayaa lagu qaataa waqti ka yar
Xawaaladda Degdega ah ee 4.0, marka laga reebo hagaajinta xawaaraha xawaaraha marka la barbar dhigo 3.0, waxay leedahay tallaabooyin xiiso leh oo loogu talagalay amniga xarunta.
Pulse waa barnaamij cusub oo loogu talagalay SMS iyada oo la adeegsanayo iyada oo loo marayo qalab noocyo kala duwan oo Pushbullet ah
Pulse waa barnaamij cusub oo loogu talagalay SMS-ka kaas oo awood u leh inuu isku waafajiyo aalado badan si loo maareeyo noocyada fariimaha.
Ku soo dejiso doqonka El Hormiguero on your Android, ma ku dhacdaa inaad isku daydo?
Maanta waxaan ku soo qaadaneynaa qeybta qosolka ee Android, oo ah barnaamij bilaash ah oo si toos ah ugu ekeysiin doona Pablo Motos's Hormiguero idiotizador idiotizador si toos ah Android-kaaga.
CAJIIB !! Sida codka loogu xakameeyo Android
Maanta waxaan ku tusayaa sida loogu adeegsado codkaaga Android si aad wax u qabato adigoon u baahnayn inaad taabato gunta gabi ahaanba, ansax ah xitaa inaad u dirto WhatsApp
Google Allo waa la cusbooneysiiyay iyada oo awood u leh saadaalinta emojis ku saleysan macnaha guud
Markaad farriin ku qoreyso Google Allo, waxaad dooran kartaa "Smart Smiley" sidaa darteed barnaamijka wuxuu ku dooranayaa emoji sida uu yahay waxaad qortay.
Sida loo isticmaalo fiidiyoo kasta sida waraaqda sawirka leh
Qoraalka soo socda waxaan ku tusi doonaa qaab aad u fudud sida loo isticmaalo fiidiyow kasta oo ah sawir gacmeed loogu talagalay Android.
CM Launcher hadda waxaa laga heli karaa qof walba si toos ah Google Play Store
Waxaan horeyba u haysannay Launcher CM qof walba, waana in Cunogenmod Launcher-ka xiisaha leh hadda lagala soo bixi karo Google Play Store
Furayaasha si loo daryeelo batteriga taleefankaaga casriga ah
Waxaan kuu soo bandhigeynaa talooyin wax ku ool ah si aad u daryeesho batteriga taleefankaaga oo aad u sii dheeraato adigoon sii xumaan. Ogowna khaladaadka caadiga ah.
Sida loo siiyo muuqaalka iPhone 7 Android-kaaga: Qufulka furaha iyo xarunta xakamaynta
Maanta waxaan kuu keenayaa seddex codsi oo bilaash ah oo siin doona muuqaalka guud ee iPhone 7 bartaada kumbuyuutarka ee Android, dhammaantood waa bilaash iyo xidid la'aan.
Sida loo isku dhajiyo codsiyada Android habka ugu fudud
Maanta waxaan ku tusinaynaa talaabo talaabo talaabo ah iyo qaab aad u fudud sida loo mideeyo codsiyada Android loona awoodo inaad u adeegsato isla waqtigaas xisaabaadka isticmaaleyaasha kaladuwan
PAIRS waa habka ugu wanaagsan ee dib loogu soo celin karo isku xirnaantaada WiFi iyo Bluetooth kadib markaad tirtirto mobilkaaga
Waxaan ku baraynaa sida loo sameeyo loona soo celiyo keydka shabakadaha WiFi iyo Bluetooth ee aad ku keydisay qalabkaaga Android.
Sida loo rakibo Android 7.0 Nougat Galaxy S7 ama S7 edge
Hadda waxaad ku rakibi kartaa nooca beta ee Android 7.0 Nougat Samsung Galaxy S7 ama Galaxy S7 gees, waxaan kuu sheegaynaa sida loo sameeyo
Sida loo soo dejiyo fiidiyowyada Facebook si aad u daawato markasta iyo sida aad rabto
Maanta waxaan ku tusayaa inaad ku caawisay barashada fiidiyowga ee la taaban karo, habka ugu fudud ee looga soo dejisan karo fiidiyowyada Facebook si aad u daawato markasta oo aan dooneyno
ZTE cusub oo wata Android Nougat, processor octa-core iyo kamaradda hore ee 13MP ayaa ka muuqda GFXBench
ZTE cusub ayaa lagu arkay aaladda caanka ah ee loo yaqaan 'GFXBench benchmarking tool' oo leh aaladda loo yaqaan 'Android Nougat, chip octa-core iyo kamaradaha hore / gadaal ee 13MP.
Google waxay daabacdaa fiidiyoow muujinaya astaamaha Android 7.1 Nougat
Android 7.1 Nougat waxay la timid muuqaalo gaar ah oo lagu faahfaahiyay fiidiyowgaan ay daabacday Google lafteeda maanta.
Wax walba oo ay Android Auto na siiso, hadda waxay la jaan qaadayaan dhammaan qalabka Bluetooth
Haddii aad rabto inaad ogaato wax kasta oo Android Auto ay na siiso qaybteeda 2.0.642, oo hadda ku habboon dhammaan baabuurta, waa inaadan seegin qoraalkan fiidiyowga ah.
Codsiga ugufiican ee loogu dejisto buugaag bilaash ah qaab sharci ah gabi ahaanba
Maanta waxaan rabaa inaan soo bandhigo midka aniga iyo inbadanba ah dalabka ugu fiican ee Android ee nagu haboon ...
Beddelka ugu fiican ee Android Auto
Haddii aad ka niyad jabtay in Android Auto uusan la jaan qaadi karin gaarigaaga, haka quusan madaama aan kuu keenayno bedelka ugu wanaagsan ee Android Auto.
Sida loogu ciyaaro fiidiyowyada You Tube adigoo shaashadda ka baxsan
Maanta waxaan ku siineynaa xalka inaad awood u yeelatid inaad ku sii socotid fiidiyowyada You Tube adigoo shaashadda ka baxsan. Shaqada ugufiican ee dhageysiga muusikada ee You Tube.
Ku ekeeysii Had iyo jeer Muujinta S7 iyo LG G5 mahadsanid codsigan bilaashka ah
Maanta waxaan kuu soo qaadaneynaa barnaamij gebi ahaanba bilaash ah oo fudud halkaasoo ay tahay in lagu ekeysiiyo Had iyo jeer Muuqaalka S7 iyo LG G5 ee Android kasta.
Ciyaaryahanka ugu wanaagsan ee muusigga ee xilligan Android waxaa lagu magacaabaa HQ Music for Android 7.0 waana gebi ahaanba bilaash
Maanta waxaan kuu keenay waxa inbadan oo ka mid ah uu yahay muusigga ugu fiican ee Android xilligan, ciyaaryahan kaa yaabi doona oo ku sixri doona.
Android Nougat ayaa si qarsoodi ah uga kooban shaashad qayb ahaan ah
Android Nougat wuxuu sii wadaa inuu muujiyo sirta qaar koodhkiisa kaas oo aan ku qaadan karno shaashado qayb ahaan ah.
Beta-ka Android 7 Nougat wuxuu gaaraa Samsung Galaxy S7 iyo S7 edge
Nooca beta ee Android 7.0 Nougat ayaa hadda loo heli karaa isticmaaleyaasha Samsung Galaxy S7 iyo S7 geesaha terminalka Boqortooyada Ingiriiska
Samsung waxay cusbooneysiin doontaa cusbooneysiinta Galaxy Note 7 oo xaddideysa baytarigeeda 60%
Samsung ayaa bilaabi doonta cusbooneysiin ku saabsan Galaxy Note 7 oo yareyneysa awooddeeda batteriga illaa 60% si ay ugu qasabto soo celinta terminaalka haray
Waxqabadka Faraha ayaa kuu oggolaanaya inaad siiso koronto kale akhristahaaga faraha ee Android
Maanta waxaan ku tusineynaa sida loo siiyo koronto kale akhristaha farahaaga Android, oo dhammaantood wata soo dejinta fudud iyo rakibidda codsi
Sawirka Vector wuxuu garaacayaa albaabka taleefankaaga Adobe Illustrator Draw
Haddii aad raadineysid qalab sawir qaadista, midka Adobe uu ugu yeeray in muddo ah, waa wax aad u fiican.
[APK] Soo dejiso oo rakib dalabka qaamuuska ugu fiican ee Android
Maanta waxaan kuu keenaynaa apk aargudasho ah oo aan rabno inaan kula wadaagno aqoonta iyo aqoonta dalabka qaamuuska ugu fiican ee Android.
Codsi lama huraan ah si aad uga dhigto boodhkaaga Android wax soo saar badan
Maanta waxaan kuu keenay mid ka mid ah codsiyadaas cajiibka ah ee loogu talagalay Android ama aaladaha lagama maarmaanka u ah ee siin doona boodhadhka Android wax soo saar badan
macruufka 9 Launcher, Apple khibrad on your Android
Maanta waxaan kuu keenaynaa Launcher Android cusub, macruufka 9 Launcher oo na siinaya khibrad macruuf ah adigoon ka tagin waxqabadka iyo caqliga Android
Ku iftiimiya oo ku hagaaji wejigaaga barnaamijka cusub ee cajiibka ah ee ka socda Adobe ee la yiraahdo Photoshop Fix
Photoshop Fix waa barnaamijka cusub ee Adobe oo leh qalab taxane ah oo aad u xoog badan oo loogu talagalay wax ka badalida iyo qurxinta wajiyada.
Leena Desktop waa launcher kuu keenaya khibrada desktop-kaaga Android-kaaga
Haddii aad raadineyso barnaamij bixiya khibrad desktop ah oo ku saabsan qalabkaaga Android, Leena Desktop ayaa ku habboon.
[APK] Hangouts nooca 14 wuxuu ku darayaa tuuryo laga soo bilaabo 7.1 iyo in ka badan
Hangouts si habboon ayaa loogu cusbooneysiiyay nooca 14 iyadoo la raacayo 7.1 dariiqooyin toosa oo la jaan qaadi kara iyo kuwa isdabajooga casriga ah.
[APK] Alfa ugu dambeysa ee Twitter wuxuu keenayaa tuuryo, daaqado badan oo loogu talagalay Nougat iyo astaanta wareega
Nooca alfa ee Twitter wuxuu keenayaa tujaabaha barnaamijyada, taageerida daaqado badan iyo astaan ​​wareegsan oo cusub.
LG V20 horeyba waxay u leedahay xidid
Chainfire wuxuu ku daabacay akoonkiisa Twitter in LG V20 uu horeyba u lahaa qaab loo heli karo ROOT oo lagu rakibo dhamaan barnaamijyadaas iyo Xposed.
Sida loo helo waraaqaha 'Live Earth' ee gaarka ah ee Pixel-ka Android-kaaga
Haddii aad rabto inaad haysato waraaqaha 'Live Earth' ee gaarka ah ee Google Pixel, ku dhex gal galkan meesha aad ku rakiban karto.
Nexus 6P baytarigiisa ayaa ku fashilmay Android Nougat
Qaar ka mid ah isticmaaleyaasha ayaa ka warbixinaya qaar ka mid ah arrimaha batteriga ee Nexus 6P markay kor u qaadeen Android 7.0 Nougat.
Sida Loogu Soo Degsado Heesaha Spotify Premium
Waxaan ku baraynaa sida loo soo dejisto heesaha ama liiska muusikada adigoo adeegsanaya Spotify Premium si aad ugu isticmaali karto khadka toosan taleefannadaada
Sida loo soo dejiyo Vine videos hada way baaba'aysaa
Hadda Vine-ka ayaa lagu baabi'inayaa waajibaadka Twitter-ka, waa inaad heshaa hab aad ku soo dejiso fiidiyowyadaas 6-ilbiriqsi ah.
Vernee Apollo Lite wuxuu heli doonaa Android 7.0 Nougat inta lagu jiro bisha Diseembar
Waxaan haynaa warka wanaagsan ee ah in Vernee apollo Lite loo cusbooneysiin doono android nougat inta lagu jiro bisha soo socota ee Diseembar 2016.
Chainfire ayaa maamusha ROOT Pixel-kiisa
Chainfire's Google Pixel-keeda ayaa ah midka la rujiyay, in kasta oo uu wali sii wado inuu ka shaqeeyo sidii loo heli lahaa qaab ka wanaagsan.
Warqadda Dijital ah ee Saacadda Dijital ah ee Bilaashka ah
Maanta waxaan ku tusayaa saacad Live Wallpaper ah oo saacad leh oo u shaqeysa sida Desktop Widget laakiin laga heli karo dhamaan kombuyutarada.
Sida Loogu raaxeysto Gudiga Xakamaynta Degdegga ee iOS-Style
Maanta waxaan sharxayaa sida loo helo guddi koontarool dhakhso leh qaabka macruufka ugu macaan ee Apple iyo iPhone-kaaga iyo iPad-yada dhammaantood iyadoon loo baahnayn xidid.
Todoist wuxuu ku darayaa taageerida daaqado badan, Barnaamijyada raadinta, Deg deg ku dar ogeysiisyada iyo inbadan
Todoist wax waqti ah iskagama lumin oo si haboon ayaa loo cusbooneysiiyey si uu u sii daayo wararka la xiriira Android 7.1 Nougat.
Qalabka batteriga ee Cyanogenmod ee dhammaan Android
Maanta waxaan ku barayaa sida loo rakibo barta batroolka ee Cyanogenmod nooc kasta oo ka mid ah terminal-ka Android iyo iyada oo aan loo baahnayn xidid.
[XALKA] Badhannada Android ee jaban ama cilladaysan
Maanta waxaan ku siineynaa xalka saxda ah ee badhannada Android ee jaban ama xiran waqti ka dib oo bilaabaya cillad.
Cusbooneysiinta Skype ee wicitaanada iyo hagaajinta codka
Skype waxaa lagu cusbooneysiiyay labada barnaamij ee Android iyo iOS si loo wanaajiyo wicitaanada iyo codka. Cusboonaysiin yar laakiin xiiso leh.
Adeegyada Google Play waxaa lagu cusbooneysiiyay culeys wanaagsan oo ah astaamo cusub iyo horumarin
Adeegyada Google Play waa mid ka mid ah barnaamijyada noo oggolaanaya inaan sameyno waxqabadyo maalinle ah iyadoo aan si dhib leh loo ogeyn waxa barnaamijkan u sabab ah
LibreTorrent waa ilo furan oo macmiil xayeysiis la'aan ku habboon u ah Android-kaaga
Macaamiil torrent u ah Android oo adeegsada inuu yahay il furan oo aan xayeysiin lahayn si loo muujiyo sida wax loo sameeyo.
Moto G4 iyo Moto G4 Plus lama cusbooneysiin doono Android Nougat, hadda
In kasta oo xaqiiqda ah in shabakadda ay sheegaan in mar horeba la heli karo, mooto G4 iyo Moto G4 Plus hadda ma haysto cusbooneysiinta Android 7.0 Nougat oo la heli karo
Sida looga helo galka ogeysiiska shucuurta sawirka sida sawirka Pixel
Haddii aad rabto inaad haysato mid ka mid ah astaamaha ugu caansan ee Pixel, tani waxay isticmaaleysaa tilmaam ku saabsan dareeraha faraha, rakib barnaamijkan.
Hadda waad hubin kartaa sida tattoo uu si toos ah ugu eegi lahaa maqaarkaaga mahadnaqa Android-kaaga
Codsigan bilaashka ah ee xasaasiga ah ee loogu talagalay Android waxaad hadda ku hubin kartaa sida tatuuyuhu si toos ah ugu eegi lahaa maqaarkaaga ka hor intaanad u sawirin
Samsung waxay tixgelinaysaa adeegsiga baytariyada LG ee Galaxy S8
Samsung waxay raadineysaa soo saare si ay u siiso baytariyada Galaxy S8 ee soo socota, waxaa ka mid ah LG, oo ay si toos ah ula tartamaan.
Abka cusub ee Google ee loogu talagalay maareynta sawir-qaadayaasha: Waraaqaha
Waraaqaha ayaa ah barnaamijka cusub ee Google si aad uhesho dhammaan waraaqaha rasmiga ah ee ku imanaya noocyada Android
Astaamaha Awoodda leh ayaa kuu oggolaanaya inaad isticmaasho xirmo kasta oo astaan ​​ah oo leh adeegsade kasta oo Android ah
Haddii furahaaga caadiga ah, lakabka caadiga ah ee casrigaaga casriga ah ee Android, uusan kuu oggolaaneynin inaad xirxirto xirmooyinka astaamaha, astaamo cabsi leh ayaa jawaabta ah.
AutoRAP ama sida loo abuuro RAPS xiiso leh qaab aad u fudud
Maanta waxaan kugula talineynaa codsi xasaasi ah oo loogu talagalay Android kaas oo noo oggolaan doona inaan abuurno RAPS xiiso leh si aan u badbaadinno oo aan u dhageysano cid kasta oo aan dooneyno.
[APK] Soo dejiso oo rakib Boost +, Dhiirrigeliyaha Android ee HTC ayaa hadda loo heli karaa qof walba
Maanta waxaan rabaa inaan dhamaantiin idinla wadaago waxa inbadan oo ka mid ah uu yahay midka ugu fiican Android optimizer, barnaamij ka socda HTC oo la yiraahdo Boost +.
Codsi aad u wanaagsan oo bilaash ah oo ku saabsan waraaqaha la duubo ee nool oo leh saameyn biyo
Maanta waxaan rabaa inaan dhammaantiin idinla wadaago codsi bilaash ah oo aad u wanaagsan oo lagu dalbado waraaqaha ugu wanaagsan ee la soo dhoweeyo ee saamaynta biyaha leh.
Infojobs, dalabka lagama maarmaanka u ah shaqo raadinta
Maanta waxaan dooneynaa inaan kugula talino arjiga ugu fiican si aad shaqo uga hesho terminaalkaaga Android. Barnaamijku waa mid kale oo aan ahayn Infojobs.net.
Khariidadaha Google ee loogu talagalay Android hadda wuxuu ku tusayaa adiga taraafikada kuugu dhow miiska desktop-ka
Khariidadaha Google ee beta-keedii u dambeeyay waxay ku dartay muuqaal cusub: toobiye oo aad ku ogaan doontid dhacdooyinka, digniinta iyo macluumaadka taraafikada
Saaxiibka Goobta Dagaalku Hadda waxaa Loogu Talo Galay Khibrad Dagaal Dagaal oo Moobeel ah
Farshaxanka elektarooniga ah ayaa dhigay baytariyada waxayna bilawday Saaxiibkiis Dagaal oo hagaagsan si aad ugu raaxeysatid wax badan oo ka mid ah labada cinwaan ee dagaalka
Samsung waxay tijaabisay baytariyada Galaxy Note 7 "guriga"
Marnaba ma ogaan karno dhab ahaantii waxa ku dhacay qaraxyada Galaxy Note 7, maadaama xilligan shirkadda Kuuriya aysan helin sababta.
[APK] Cusbooneysiin cusub oo hagaajisa batteriga marwalba On Display ee Galaxy S7 iyo S7 gees
Waxaad hadda soo dejisan kartaa APK-ka ee had iyo jeer muujinta muujinta ee hagaajineysa isticmaalka batteriga ee shaqadan ee Galaxy S7 iyo S7 edge
Thymus-ka geedka qaniinyada qaniinyada ee doonayay inuu u ekaado tufaaxa iyo «tufaaxa yar ee la qaniino»
Maanta waxaan kuu soo gudbineynaa warka ku saabsan khayaanada ama wax isdaba-marinta geedka qaniinyada ee la doonayay inuu u ekaado Apple, shirkad loo maleynayo inay ka timid Extremadura oo is qarisay Xiaomis
Sida loo ogaado IMEI-ka taleefankayga casriga ah
Maanta waxaan sharxayaa siyaabaha kala duwan ee aan ku ogaan karno lambarka IMEI ee wax kasta oo Smartphone Android ah iyadoon loo eegin nooca ama nooca.
Waraaqaha ugu wanaagsan ee shaashadda AMOLED iyo SuperAMOLED
Maanta waxaan rabaa inaan kugula taliyo waxa aniga aniga ah oo ah dalabka ugu fiican ee lagu helo waraaqaha sawirada ee AMOLED iyo SuperAMOLED.
Barnaamijkan oo uu soosaaray isticmaale kana soosaaray XDA Forums, waxaad ku damin kartaa shaashadda taleefankaaga casriga ah adigoo dareemaya sawirka faraha.
Flychat, Rasuulku wuxuu ka gooyaa WhatsApp, Telegram, Hangouts, Skype, iwm, iwm ... ..
Maanta waxaan kugula talineynaa Flychat, barnaamijka kuu keenaya xumbada Rasuulka ee WhatsApp, Telegram, Skype, Line iyo barnaamijyo kale oo la mid ah
[APK] Sida loo haysto barnaamijka Pixel Camera ee qalabkaaga oo leh Android 7.0+
Haddii aad haysato qalab Android ah oo leh Nougat 7.0 ama ka sareeya, waxaad ka heli kartaa APK-ka Kamaradda Google oo u gaar ah Google Pixel.
Xposed's moduleka 'AndroidN-ify' wuxuu keenayaa Kaaliyaha Google dhammaan qalabka leh Marshmallow
Kaaliyaha Google ayaa kuu noqon kara taleefankaaga casriga ah ee 'ROOT' iyo Marshmallow mahadnaqa moduleka AndroidN-ify ee maanta la cusbooneysiiyay.
[APK] Ku soo dejiso abka Google Pixel Phone barnaamijka Nexus-kaaga ama terminal-kaaga CM
Haddii aad leedahay Nexus ama qalab leh CyanogenMod, waad soo dejisan kartaa APK si aad u hesho barnaamijka Google Pixel Phone.
Duolingo wuxuu ku biirayaa qandhada bot
Duolingo waa mid ka mid ah barnaamijyada ugu wanaagsan ee loogu talagalay barashada luqadaha waxaana lagu cusbooneysiin doonaa sheeko-wadaha si loo siiyo wada-hadal dabiici ah
Soo dejiso oo rakib Slimperience shabakadda shabakadeed ee ugu fudud uguna qaabeynta badan xilligan
Maanta waxaan rabaa inaan soo bandhigo waxa aniga ii ah kan ugu fiican miisaanka mareegaha ee xilligan, biraawsar loo yaqaan Slimperience waana wax la yaab leh.
[ROOT] Sida loo rakibo MaxxAudio wax kasta oo Android ah
Maanta waxaan ku tusineynaa sida loo rakibo MaxxAudio goob kasta oo Android ah sidaasna aad ugu raaxeysan karto mid ka mid ah kuwa ugu fiican ee isla siman Android xilligan.
4 barnaamijyo gaar ah oo loogu talagalay ardayda jaamacadda iyo maareynta mashruuca kooxda
Haddii aad raadineyso barnaamijyo wax soo saar oo aad horeyba u bilowday jaamacad, barnaamijyadan 4-ta ah waxay ku imaan karaan waxtar si ay uga faa'iidaystaan ​​mashaariicdaas.
Ka dib markii cusbooneysiintu la timaadda tifaftirka qad la'aanta ah ee sawirada ku jira Android-ka ee leh 'Prisma', taageerada fiidiyowyada ka socda barnaamijka ayaa la isku dari doonaa
[APK] Yahoo ayaa barnaamij cusub ka soo saartay Android si siyaabo kale ah loogu wargaliyo: qolka wararka
Qolka Newsroom waxaad awoodi doontaa inaad si joogto ah ula socoto wararka oo dhan isla markaana aad u abuurto qaab kale oo aad kula jaanqaadi karto wax kasta oo adduunka ka dhaca.
[APK] Shazam Lite nooca Lite-ka ah ee Shazam wuxuu ku habboon yahay boosteejooyinka leh kheyraadka nidaamka yar
Maanta waxaan kuu keenayaa apk-ka Shazam Lite, nooca akhris-qorista cusub ee Shazam oo si gaar ah loogu talagalay boosteejooyinka leh ilaha yar iyo isku-xirnaanta gaabiska ah.
[Fiidiyow] Tani waa sida ay u shaqeeyaan Pixel Launcher Launcher Shourcouts
Maanta waxaan kuugu soo bandhigeynaa fiidiyow sida ay u shaqeyso Launcher Shourcouts of Pixel Launcher, Launcher-kii hore ee Google Pixel-ka cusub.
Kaaliyaha gaariga ee ugufiican waa bilaash waana jeclaan doontaa
Maanta waxaan soo bandhigeynaa midka aniga iyo inbadan oo isticmaaleyaasha ah ee Android ah uu yahay kaaliyaha ugu fiican gaariga, codsi aan ka maqnaan karin Android-kaaga.
Camera 51, oo ah barnaamijka kamaradda ugu fiican ee loo yaqaan 'dummies' sawir qaadista
Maanta waxaan rabaa inaan soo bandhigo waxa aniga aniga ii ah codsiga ugu fiican ee kamarad ee loogu talagalay dummies sawir qaadayaasha Android ama sawir qaadaha moobiilka.
Motorola waxay ku dhawaaqeysaa boosteejooyinka lagu cusbooneysiin doono Android 7 Nougat
Motorola waxay daabacdaa liiska boosteejooyinka lagu cusbooneysiin doono Android 7 Nougat, oo ay ku jiraan labo lama filaan ah oo isticmaalayaal badani jeclaan doonin
SwiftOpen si dhakhso leh isugu beddel barnaamijyada aad jeceshahay
Maanta waxaan soo bandhigayaa codsi bilaash ah oo loogu talagalay Android, kaas oo naga caawin doona inaan si dhakhso leh ugu beddelno barnaamijyada aad jeceshahay arrinka toban meelood meel labaad.
Android N Quickcuts waa bilaash Android kasta
Maanta waxaan sharxeynaa sida loo helo bilaash ah 'Android N Quickcuts' wixii Android 5.0 ama wixii ka sareeya ah iyadoo la rakibayo Fudud oo fudud.
[APK] WhatsApp ugu dambayntii waxay horeyba u oggolaatay, beta-ka, inay u dirto GIF-yada firfircoon
Haddii aad taageere u tahay GIF-yada firfircoon iyo WhatsApp, laga bilaabo maanta waxaad ku diri kartaa beta-ka nooca ugu dambeeyay ee lagu sii daayay Google Play Store.
[APK] Download hadda Messenger Lite 1.0 oo leh xulashooyinka aasaasiga ah ee Facebook Messenger
Hadda waad soo dejisan kartaa APK-ka 'Messenger Lite', nooca aasaasiga ah ee ugu weyn ee loo diro qoraallada iyo sawirrada iyagoon wax cabsi ah qabin.
Messenger Lite, oo ah nalka iftiinka ah ee lagula xiriiro dadkaaga barta Facebook
Haddii aad raadineyso Rasuul miisaankiisu ka fudud yahay kuna habboon xaaladaha isku xirnaanta ee aan wanaagsaneyn, Messenger Litle ayaa ah ikhtiyaarka ugu fiican
Sida loo helo Android 7 Quickcuts on kasta oo Android ah.
Maanta waxaan ku siineynaa laba fursadood oo aad ugu raaxeysan karto Android 7 Quickcuts on kasta oo Android ka hor inta aysan si rasmi ah u imaan.
Pokemon GoodBye Go, Root Hello
Barroosinka hadda wuxuu leeyahay barnaamijkiisa podcasting-ka 2-daqiiqo ah oo ku saabsan Android
'Anchor' waa codsi cusub oo loogu talagalay abuurista boodhadh kooban oo keliya 2 daqiiqo waana lagu daabici karaa shabakaddaada.